‘कि मर्न देऊ, नत्र बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड देऊ’ | abc.com.np
त्यसपछिका दिनमा सीताले आफ्नै बाबुको कान्छी श्रीमती बराबरको हैसियतमा बस्नु पर्‍यो । ‘आफ्नो श्रीमतीलाई काममा पठाउने र एकान्त हुने वित्तिकै छोरी सीतालाई प्रकाशले कति पटक बलात्कार गरे त्यसको कुनै हिसावकिताव छैन् । एसएलसीमा राम्रो अंक ल्याएर पास गरेकी सीतालाई प्रकाशले मोबाइल किनिदियो, मम खुवायो, गाडीमा बोकेर हिड्यो, बलात्कार गरिरह्यो । सीता नर्स पढ्न चाहान्थिन्, तर, उसले सीतालाई फकाउँदै भन्यो,‘मैले भनेको जस्तो गरिराख, म सवै गरिहाल्छु नि ।’ गत साउन ३० गतेका दिन भने घटना उल्टो घट्यो । आफ्नै बाबुको कान्छी श्रीमती भएर बस्नु भन्दा मर्नु नै बेश मानेर उनले विष सेवन गरी आत्महत्या प्रयास गरिन् । तर, उनलाई देख्नेले बचाए । उनले सुसाईट नोटमा लेखेकी थिइन्,‘ बाउको कान्छी श्रीमती बनेर बस्नु भन्दा मर्न बेश । म मरेपछि मलाई बलात्कार गर्ने बाउ र हजुरवाउलाई मृत्युदण्ड दिइयोस् ।’ तर, दुभाग्र्य त्यो सुसाईट नोट प्रहरीले फेला पारेन, बरु उनकै बलात्कारी बाउले फेला पारे । अस्पताल पुर्‍याइयो, डाक्टरले पनि बयान लिए, उनले पनि सवैकुरा बताईन् । प्रहरीले प्रमाण संकलनसँगै बलात्कारी बाबुलाई पक्राउ गरी कानूनी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सीता अस्पतालमा नै बस्दा पनि बन्दीको हैसियतमा बस्नु पर्‍यो । सीतालाई अहिले विगत लामो समयदेखि यौनहिंसा विरुद्ध लड्दै आएको रक्षा नेपाल नामक संस्थाले आश्रयमा लिएको छ । अहिले सीताको एउटै माग छ, ‘कि मलाई मर्न देऊ, नत्र बलात्कारी बाउ, हजरबाउलाई मृत्युदण्ड देऊ ।’
कसरी सीता बलात्कृत भइन् ?
सीता सानै थिइन् । उनको गाउँ बेसीमा घर थियो । बाबु विदेशीएका थिए । एक दिन हजरबुबा विरामी परे । खाना पकाएर खुवाउँछे भन्दै नातिनीलाई उनकी आमाले बेशीमा हजुरबुवासँगै छाडिन् । त्यसदिन राती उनका हजुरबुबाले सानै भएकाले डराउने भन्दै आफैसँग सुताए । सुत्ने क्रममा राक्षसी चरित्रका ती हजुरवाउले बालिकाको संवेदनशिल अंगमा चलाउने, छुने गर्दै बलात्कार गरे । सीतालाई थाहा पनि थिएन कि हजुरबाउले के गरे ? भोलीपल्ट एकदमै रक्तश्राव भएपछि आफै अस्पताल पनि पुर्‍याए, ती हजुरबाउले । उनले कसरी यो केशलाई मिलाए, सीतालाई पत्तो मिलेन् । फेरि हजुरवाउले बलात्कार गरेपछि रक्तश्राव धेरै भएको खबर सीताको आमाकहाँ पुग्यो । तर, उनले इज्जत जाने डरका कारण छोरीको कुरा कहिल्यै सुनिनन् । एउटी अवोध बालिकामाथि लगातार यसरी अपराध हुँदै गयो । त्यसपछि जव अलिअलि सीतालाई थाहा हुन थाल्यो उनी छलेर त्यहाँ बस्न छाडिन् । हजुरवाउले बलात्कार गरेको तीन बर्षपछि विदेशबाट सीताका बाउ फर्किए । उनले न्याय पाउने आशामा सवैकुरा आफ्नो बाबुलाई भन्ने निधो गरिन् । तर, दुभाग्र्य तिनै राक्षस बाबुबाट पटकपटक बलात्कृत मात्र हुनु परेन्, कान्छी श्रीमतीको दर्जामा समेत बस्नु बाध्य भईन सीता । त्यसपछि सीतासँगै कुनै विकल्प थिएन् । आफू अन्यायमा परेको सुन्ने कोही थिएन्, आफ्नो भन्ने कोही नभएपछि मानसिक तनावका कारणका उनले आत्यहत्याको बाटो रोजिन् । उनलाई बलात्कार गर्ने हजुरबाउको नाम ईन्द्रबहादुर कार्की हुन् । हजुरबाउलाई समेत कानूनी कठघरमा ल्याउने प्रयासमा काभ्रेका एसपी अरुण विसी जुटेका छन् । काभ्रे प्रहरीका एसपी अरुण विसीले बलात्कारी राक्षसबाबुलाई पक्राउ गरी कारवाहीका लागि कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् भन्दै आज राजधानीबाट प्रकाशित हुने जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।